Nhau - Edible_biodegradable yekutsvagisa mapakeji
Tsvagurudzo yesainzi nezve kugadzirwa, mhando uye zvinogona kushandiswa zvemafirimu anodyiwa / anogadziriswa zvigadzirwa mukugadzirwa kwechikafu kwakaitwa nemapoka ekutsvagisa pasi rese uye zvakataurwa mumabhuku ekutsvaga.5-9. Hukuru hwekutengesa uye hwezvakatipoteredza kugona munzvimbo inodyiwa / biodegradable mafirimu / machira yakagara ichimanikidzwa5,10,11 uye akawanda mabhuku akatsanangura zvakanyanya zvine chekuita nema mechanical zvimiro, gasi kutama, uye mhedzisiro yezvimwe zvinhu pane izvi zvivakwa, senge mhando uye zvirimo zvemapurasitiki, pH, hunyoro hune hukama uye tembiricha etc.6,8,10-15.
Nekudaro, kutsvagurudza mumafirimu anodyiwa / anogadziriswa zvigadzirwa achiri mudiki uye kutsvagisa kwekushandisa kwemaindasitiri emafirimu anodyiwa / anogadzirwa nemafuta akagamuchira kutarisisa mumakore achangopfuura, zvisinei, kufukidza kuchiri kushoma.
Vatsvagiri veChikafu Packaging Boka, Dhipatimendi reKudya uye Nutritional Sayenzi, University College Cork, Ireland, vakagadzira akawanda anoshanda, biopolymer-based, anodyiwa / biodegradable mafirimu mumakore mashoma apfuura.
Kukanganisa kwekudyiwa kwekudyara
Kazhinji, mafirimu anodyiwa ane mashoma ekushandisa kunyanya nekuda kweakaderera hunhu hunhu. Semuenzaniso, asina kuroorwa, lipid-based mafirimu ane yakanaka hunyoro chipinganidzo zvivakwa asi haina simba rechimakanika23. Nekudaro, akaomeswa mafirimu akaumbwa nekunamatira maviri kana anopfuura biopolymer mafirimu pamwechete. Zvisinei, mafirimu akaomeswa anobatsira kune imwe chete, emulsion-based biopolymer mafirimu nekuda kwekuva kwavo neyakagadziriswa chipingamupinyi zvivakwa. Kugadzirwa kwezvivakwa zvakaomeswa zvine mukana wekukunda kukanganisa uku neinjiniya inodyiwa / inogadziriswa mafirimu ane akawanda mashandiro.
Mafirimu anodyiwa uye kupfeka kunoenderana nemvura-inogadziriswa mapuroteni anowanzo gadzirisirwa mvura asi ane yakanakisa okisijeni, lipid uye flavour chipingaidzo zvinhu. Mapuroteni anoshanda seanobatana, akaumbwa matrix mumasisitimu akawandisa, kuburitsa mafirimu uye kupfeka zvine yakanaka michina zvivakwa. Lipids, kune rimwe divi, inoshanda seyakanaka mwando zvipingaidzo, asi iine hurombo gasi, lipid uye flavour zvipingaidzo. Nokubatanidza mapuroteni uye lipids muemulsion kana bilayer (membrane ine maviri mamorekuru maseru), hunhu hwakanaka hweese ari maviri hunogona kusanganiswa uye zvakashata zvadzikiswa.
Kubva pakutsvagisa kwakaitwa neKudya Kuteedzera Boka kuUCC, maficha akajairika eanodyiwa / anogadziriswa mafirimu anotevera:
Ukobvu hwezvigadzirwa zvinodyiwa / zvinogadziriswa mafirimu zvinotangira pa25μm kusvika 140μm
Mafirimu anogona kunge akajeka, akajeka, uye achiyera kana opaque zvinoenderana nemidziyo inoshandiswa uye maitiro ekugadzirisa anoshandiswa
Kuchembera chaiwo mafirimu mafomu ari pasi peanodzorwa mamiriro ezvakatipoteredza akavandudza mega zvivakwa uye gasi chipingaidzo zvivakwa
Kuchengeta mafirimu ari ambient mamiriro (18-23 ° C, 40- 65 muzana RH) kwemakore mashanu hazvina kuchinja zvakanyanya chimiro
Mafirimu akaumbwa kubva pamhando dzakasiyana anogona kusanganiswa nyore nyore pamwe chete
Mafirimu akagadzirwa anogona kunyorwa, kudhindwa kana kupisa kwakanamwa
Madiki misiyano mufirimu microstructure (semuenzaniso biopolymer chikamu kupatsanura) inokanganisa mafirimu zvivakwa